Dagaalkii Khasaaray • Waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans • Dawooyinka Inc.eu
By: mr. Kaj Hollemans, KH Talo Sharci
Sida laga soo xigtay Wasiirka Caddaaladda iyo Amniga Grapperhaus soo-saarista iyo qaybinta dhammaan daawooyinka qaybta ugu culus ee Xeerka Opium (kookayn, amphetamine, ecstasy iyo GHB) waa in si adag wax looga qabtaa. Wasiirka ayaa ku doodaya 'Dagaal ka dhan ah daroogada' sababtoo ah sharciyeynta daroogooyinkaasi ikhtiyaar uma noqon doonto. Si kastaba ha noqotee, haddii wax uun caddaadeen sannadihii la soo dhaafay, waa tan: 'Dagaalkii Mukhaadaraadka' ayaa ku fashilmay adduunka oo dhan. Adduunka oo dhan, in ka badan 90 bilyan oo euro ayaa lagu kharash gareeyay dagaalkan. In kasta oo lacag aad u tiro badan lagu maalgeliyey la dagaallanka daroogada, haddana caqabadaha ayaa sii kordhaya halkii ay ka sii yaraanayaan.
Mid ka mid ah dhowaan isku dhac ee Doodda Siyaasadda Caalamiga ee Daroogada - oo ah shabakad caalami ah oo ururada bulshada rayidka ah oo leh in ka badan 170 ururro aan dawli ahayn oo ku lug leh siyaasadda daroogada - waxay muujineysaa in isticmaalka daroogadu uusan hoos u dhicin, laakiin uu kordhay 2011 boqolkiiba (!) Intii u dhexeysay 2016 iyo 31 kordhay. Suuqyada dawooyinka sharci darrada ah ayaa si ballaadhan u ballaariyay si ay ula kulmaan baahidan sii kordhaysa, iyada oo soosaarka opium uu kordhayo boqolkiiba 2009 iyo waxsoosaarka coca 2018 boqolkiiba inta udhaxeysa 130 iyo 34.
Marka la soo koobo, 'Dagaalkii Mukhaadaraadka' xal maahan oo waa wax aan faa'iido lahayn. Isla marka sharciga iyo booliisku ay cadaadis dheeri ah saaraan suuqa dawooyinka, halistu way sii kordheysaa oo faaidada faa iidadu way sii kordheysaa. Taasi waxay soo jiidanaysaa dambi aad u daran, oo leh cawaaqibkeeda oo dhan.
Dhowaan dhakhtar ka socda Nijmegen, Kees Kramers, ayaa ku dooday in xtc sharci waa inuu ahaadaa. Sida laga soo xigtay isaga, sharciyeynta waxay horseedi doontaa dembi yar iyo daadinta qashinka halista ah ee sunta kiimikada. Borofisar ka ah daryeelka mukhaadaraadka Wim van den Brink ayaa hore u tilmaamay inay ka fiicnaan lahayd dawladda xtc, sida cannabis, waxay xakameysaa.
Falcelinta CDA, xisbiga Wasiir Grapperhaus, ee dadaallada noocan oo kale ah nasiib darro waa wax la saadaalin karo. CDA ma rabto inay aqoonsato in dagaalka ka dhanka ah warshadaha dawada synthetic lagu lumiyey faa'iidada bilyan-doolar. "Ma abaalmarin doonno dambiilayaasha, laakiin waa la ciqaabi doonaa", ayuu yiri xildhibaan CDA ah. Xaqiiqda ah in hadda la muujiyey in qaabkani aanu shaqeyneyn, laakiin kaliya u horseedaya dembiyo badan oo la xiriira daroogada iyo isticmaalka daroogada oo badan, ayaa muuqata inaanay khusayn siyaasada Hague.
2017 waxaan sidoo kale ku dooday sharciyee cannabis iyo xtc.
Ujeedada laga bilaabayo siyaasada daroogada ayaa ah in la xadido halista caafimaadka bulshada sida ugu macquulsan iyo in laga hortago waxyeelada bulshada iyo bulshada. Iyadoo lagu saleynayo arintaas, waxay noqon laheyd mid caqli gal ah in la xakameeyo daroogada lana go'aamiyo waxa iyo waxa aan loo ogoleyn walax kasta, sida khamriga iyo tubaakada.
Ujeedada mudnaanta siyaasadda daaweynta Nederlandka waa in ay mar labaad noqotaa in la ilaaliyo dadka halkii ay la dagaalamaan mukhaadaraadka Isticmaalka isticmaalka mukhaadaraadka waa in ay ahaato bilawga, oo laga bilaabo laba daroogo yar oo daroogo leh: cannabis iyo ecstasy.
Dadku waxay isticmaalaan cannabis ama xtc sababo kala duwan. Inta badan kiisaska, waxay yihiin dad qaan gaar ah oo mas'uulka ka ah oo si daacad ah u doorta inay sidaa sameeyaan. Isticmaalku wuxuu ku daray qiimaha badankooda. Waxay dareemayaan saamaynta sida wanaagsan. Dadka qaarkiis waxay dhibaato u geystaan ​​(darajo badan) isticmaalka daroogooyinkaas. Waxaa jira haggid iyo caawimaad ku filan iyaga, sida khamriga.
Cannabis iyo xtc waa in la siiyaa xaalad sharci ah iyo qawaaniin gaar ah. Sidan, shuruudaha waxaa loo dejin karaa habka wax soo saarka, asalka, halbeegga iyo tayada, iyo dadku waxay ogyihiin waxa ay sigaar cabayaan ama liqayaan. Tani waxay u horseedaa inay u muuqato mid ugu nugul bulshada iyo bulshada iyo khatarta ugu jirta caafimaadka dadweynaha. Nidaamka daroogada oo ku saleysan cilmi baaris iyo cilmi baaris. Waa inaad soo raacdid.
Waxaa jiri doona tijaabin loogu talagalay cannabis kaas oo beerista loo oggol yahay xaaladaha qaarkood. Taasi waa talaabada koowaad ee jihada saxda ah. Laakiin wax isbeddel ah oo dheeraad ah ma ahan wakhtigaas. Siyaasadda Hague ayaa ka soo horjeeda dhammaan daawooyinka dabiiciga ah, dhagoolka digniinta iyo indha la'aanta xaqiiqooyinka, dagaal aan macno lahayn leh oo lumiya.
Jaamacadda Wageningen iyo Saxeex, hogaamiyaha suuqa ee nidaamka nalalka LED, ayaa iska kaashanaya cilmi baaris muddo dheer ah oo ...
Dhismaha San Pedro: asalka iyo saamaynta
San Pedro (Echinopsis pachanoi) waa cactus asal ahaan ka soo jeeda dalcadaha Andean ee Ecuador iyo Peru. Midkan…